Qamaarka iyo dhibaato ku hayo dadka soogalootiga ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Rag ku sugan dabakaayada tensta Tobak oo qamaaraya. Foto: Warsame Elmi, SR International
Qamaarka iyo dhibaato ku hayo dadka soogalootiga ah
La daabacay torsdag 21 mars 2013 kl 14.56
Dhallinyarada raga ah iyo shaqsiyaadka asalkooda dibada ka soojeeda qatar ka weyn kuwa kale ayey ugu suganyahiin in a qabatimaan qamaarka, sidaas waxaa lagu sheegey cilmi-baaris cusub oo la soo ban-dhigey asbuucaan. Hadaba si wax looga qabto dhibaatadaan waxaa loo baahanyahay in tilaabooyinka wax ka qabadka loo jeediyo qamaarka qatar dheeraadka ah leh, sida turubka Poker iyo mashiinada lacagta lagu shubo oo lagu ciyaaro.
Dabakaayada Tensta Tobak waqooyi galbeed magaalada Stockholm waxaa ku sugan Ali oo tartanka fardaha kala socda Tv:ga. Ugu yaraan sabti kasta ayuu tagaa halkaas si uu qamaaraayo.
Fardaha uu Ali qamaarka u dhigtey midna ma reyn ayuu yeri , waxuu ii sheegay in uu maalin kasta oo ay jirto ciyaaraha fardaha uu lacag u dhigto, 100 karoon qiyaastii ayuu yeri.
Dabakaayada waxaa sidoo kale ku sugun rag gaaraya sodomeeyo oo tv:ga isha ku wado-haya, inta badana gacanta ku hayaan rasiidkii qamaarka ay dhigteen.
Boqolkii 70 dadka Iswedhen ayaa la qiyaasaa in ay qamaar u dhigtaan ciyaaraha sannad kasta. Waxayaabaha ay qamaarka u dhigtaan ayaa kalo ahaan kara turubka Pokerka ee internetka, baqtiyo & nasiibka iyo ciyaaraha fardaha.
Inta badan wax dhibaato ah kalo kulminaa qamaarkooda, laakiin qaar yar oo kamid ah, qiyaastii 164.000 oo ruux ayaa la qiyaasayaa in qamaaridooda dhibaato u keento, tiradaasna waxaa ku jira koox si gooniya uga dhex muuqaneysa. Waana dhallinyarada raga ah kuwaas oo ay tirada dhibaatada kala kulanta qamaarka ay afar jibaarantey 12:kii sanno ee ugu danbeeyey. Arinta sababteyna waxa weeyaan markey soo caan baxdey ku qamaarida Pokerka internetka sannadkii 2007. Koox kale oo ay dhibaatada qamaarka ku badantahay waxa weeye shaqsiyaad asalkooda dalka dibadiisa ka soo jeedo, sida ay tiri Jessica Svensson oo cilmi-baare ka ah rugta Folkhälsoinstitutet.
- Mida layaabka leh waxa weeyaan marka la fiiriyo dhallinyarada iyo shaqsiyaadka asalkooda meel-kale ka soo jeedo. Runtii baaxada qamaarkooda wey ka yartahay dadka kale, laakiin dhibaatada ay qamaarida kalo kulmaan wey ka badantahay mida dadka kale la kulmaan. Arintaa waa dhibaato, waxaase loo baahnayahay in la eego ruuxa xaaladiisa nolaleed oo dhan iyo daruufaha ku gudban, waxa uu ka aaminsayahay mustaqbelkiisa, dhaqaalahiisa sida uu yahay iyo weliba amniga bulshadeed oo uu heysto, ayey tiri.
Sawirka guud dadywiga qamaara ayaan aheyn mid cad ayaa lagu yeri warbaxinta cilmi-baaristaan ay soo saartey rugta Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap oo magaceeda loo soo gaabiyo FAS. Tusaale hadii loo soo qaato haweenka muslimka ah ayaan aheyn kuwo qamaara.
In soo galootiga ay ugu badanyahiin dadka qamaarka dhibaatada kalo kulma ayaa salka ku heyn karta in inta badan ay ku noolyahiin xaalada dhaqaale oo liidata, kuwaas oo rajeynaya hadii ay qamaarka ku rayaan in dhibaatadooda dhaqaale ay meesha ka baxeyso, sidoo kale shaqo la’aanta ayaa abuuri karta baahi ah waqti wax kaloo la geliyo.
Mid ilaa hada la ogyahey ayaa ah in sadex meelood dadka ay la soo gudboonaato dhibaatada qamaarka ay sannad kasta ka baxaan dhibatadaas. Laakiinse tiro intaas la’eg ayaa sannad kasta booskooda buuxiya oo ay dhibato kalo soo gudboonaataa qamaarka, taas oo ka dhigeysa tirada dadka Iswedhen ee qamaarku dhibaatada u keenu mid sannad kasta halkeeda joogta.
Laakiin hadii laysku bar-bardhigo aqoonta loo leeyahay qabatinka alkolada iyo qamaarka waxaa muuqaneysa in cilmi-baarista lagu sameeyey qamaarka ay tahay mid aad uga yar.
Waxaa sidoo kale cad in qarmaarka qaarkiisa ka dhibaato badanyahay qaarka kale, waana qamaaryada noocaas ah kuwo ay tahay in wax laga qabto hadii la doonayo in la yareeyo dhibaatooyinka qamaarka, sida uu aminsayahay Per Binde oo ah cilmi- baaraha warbaxinta qorey.
- Hadii la yareeyo qamaarka keena dhibaatooyinka saa’idka ah, sida qamaarka lagu ciyaro daarta kasiinada, mashiinada iyo Pokerka , kuwaas oo leh dhibaatooyin saa’id ah , taliaabadaas waxey noqon kartaa mid wax ku ool ah, ayuu yeri Per Binde oo cilmi-baaristaan isku duwey ahna bare jaamacada Göteborg.
5.000 oo karoon ayaa calaa ruux dalkaan Iswedhen ku beerdareeyaa qamaarka sannadkasta. Inta badanaya waxba kuma raayaan, laakiin fursadaha in uu ku guuleysan karo lacag faro badan hadii uu ciyaaro Turubka Pokerka, baqtiyo & nasiibka iyo fardaha ayaa ah mida dadka ku jiideysa in ay Qmaaraan.
Ali oo ku sugan Tensta Tobak, asaga inta badan ma raayo , sidoo kalena lacag badan ma qasaaro madaama sida uu sheegey uusan wax badan qamaarin.
Halka caawin u raadsan karo ruuxa qabatimey qamaarka
Qofka u baahan cawin ee raba in uu iska dhaafo qamaarka ama qaraabo la’ah ruux qamaarka dhibaato ku hayo waxaajira xarun loogu talo galey oo uu caawin weydiisan. Ciiwaanka xaruntana waa www.stodlinje.se macluumaadka xaruntaas ayaa lagu heli karaa luuqada afka soomaliga hadii uusan ruuxa afka Iswedhiska sifiican u aqoonin.